शब्दक्षेत्र: September 2015
ब्रह्माण्डीय चेत आवश्यक छ ।
साहित्य कला हो । साहित्यले समाजलाई बुझ्छ र आम मानिसलाई पनि बुझाउने प्रयत्न गर्छ । मकवानपुरे समाजलाई पनि साहित्यले कुनै न कुनै सन्दर्भमा समाजको वास्तविकता बुझाउने प्रयत्न गरिरहेको देख्न सकिन्छ । साहित्य कला व्यक्तिको अन्तरक्षमतामा आधारित हुन्छ । व्यक्तिको साहित्य गुणलाई अभ्यासको माध्यमबाट सशक्त र विकसित गर्न सकिन्छ । मकवानपुरे साहित्यमा साहित्य संगम मकवानपुर परिचित, परिभाषित नाम हो । साहित्यको अभ्यासमा २८ बर्ष लामो इतिहास बोकेको साहित्य संगम मकवानपुरले शनिबारबाट सुवास खनालको युवा नेतृत्व पाएको छ । यसै सन्दर्भमा नवनिर्वाचित अध्यक्षसँग समृद्ध समाजले गरेको कुराकानीः
समाजः साहित्य संगमको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाईले नेतृत्व पाउनुपर्ने आधारहरु के–के मान्नुहुन्छ ?
खनालः एक त म आफू संगमको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हुँ । दोस्रो संगम युवा नेतृत्वमा जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । त्यस आधारमा म संगमको अध्यक्ष हुनु स्वभाविक अनुभव गर्दछु ।
समाजः साहित्य संगमको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
खनालः भौतिक हिसाबमा कुरा गर्दा संगम भवनको दोस्रो तल्ला थप्ने काम चलिरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्नु छ । साहित्यिक हिसाबले कुरा गर्दा संगममा साहित्यिक डिस्कोर्सलाई अलिक बृहत्तर बनाएर अगाडि बढ्नु छ । साथै सन्ध्या सञ्चालनको एकोहोरो निरन्तरताले मात्र संगमलाई अलिक ठूलो आयाममा नपु¥याएका कारण केही पृथक कार्यक्रमहरु जोड्दै जानुको आवश्यकता देखिन्छ र त्यसलाई जोड दिनेछौँ ।
समाजः साहित्य संगम मकवानपुरले मकवानपुरको साहित्य क्षेत्रमा कसरी, कस्तो योगदान गरिरहेको छ ?
खनालः साहित्य संगम मकवानपुर मकवानपुरको अग्रणी साहित्यिक संस्था हो । यसले समग्र मकवानपुरको साहित्यिक प्रवर्धनलाई जोड दिएको छ । हेटौँडामा रहेर साहित्यिक सिर्जना गरिरहनुभएकाहरुको साझा प्लेटफर्म हो । मकवानपुरमा मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा परिचित भइरहनुभएका यहाँका प्राय सर्जकहरु यही प्लेटफर्म प्रयोग गरेर माथि उठ्नुभएको देखिन्छ । यसले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उहाँहरुको साहित्यिक योगदानको कदर गरी सम्मान अर्पण गर्दै आइ रहेको छ । यसपालि मात्रै पनि भूकम्प पिडीत साहित्य सर्जक तथा कला सर्जकहरुलाई अन्य संघ संस्थाहरुसँगै मिली सहयोग राशी उपलब्ध गराउने किसिमको सामाजिक काम पनि गरेको छ ।
समाजः यसपटकको अधिवेशनमा केही सदस्यले बहिष्कार समेत गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? उनीहरुलाई समेट्ने योजना के छ ?
खनालः यो जुन निर्णय भयो मेरो विश्वासमा सही भएको छैन । संगमभित्र रहनु वा बाहिर रहनुले साहित्यिक सर्जकको सामाजिक उत्तरदायित्व बलियो वा कमजोर भएर जाने होइन । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । अधिवेशनकै अवधिमा पनि सहमतिको वातावरण बन्छ भने म आपूm पछि हट्न तयार छु भनेर सबै सामू प्रष्ट विचार व्यक्त गरिरहेको व्यक्ति हुँ । अब पनि म साथीहरुलाई सहृदयतापूर्वक साधारण सदस्यबाटै बाहिरिने निर्णयमा नपुग्न आग्रह गर्दछु । मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत सम्मान उहाँहरुप्रति सधै रहीरहने विषय प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।
समाजः साहित्य संगम मकवानपुरले साहित्यको अभ्यासमा फराकिलो दायरा बनाउन नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
खनालः तपाईँले भन्नुभएको सही हो यसले अबका दिनमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अघि बढ्नु जरुरी छ । र यो कार्यकालमा पनि त्यो प्रयत्न अघि बढ्ने यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
समाजः साहित्यमा मकवानपुरको मौलिकता के पाउनुहुन्छ ? साहित्यमा मकवानपुरले कुन पाटोलाई कम ध्यान दिएको जस्तो देख्नुहुन्छ ?
खनालः लेखनका हिसाबले मकवानपुरको साहित्यिक मौलिकताको कुरा गर्दा पछिल्ला समयका केही छाडेर सुसंस्कृत साहित्यिक परम्परा देख्दछु । एकदम नढाँटी भन्नु हो भने यहाँको साहित्य अलिक सीमित कोटीमा अघि बढीरहेको छ । ग्लोबल युग हो ब्रह्माण्डीय चेत आवश्यक छ ।
Posted by subas at 8:38 AM Links to this post